Taliye cusub oo la wareegay hogaanka howlgalka tababarka Midowga Yurub ee ciidanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliye cusub oo la wareegay hogaanka howlgalka tababarka Midowga Yurub ee ciidanka Soomaaliya
27th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Taliyaha cusub ee hogaaminaya Howlgalka Tababarka ciidamada Soomaaliya ee Midowga Yurub, Bridg Gen Antonio Maggi ayaa munaasabada maanta lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, xilka ugala wareegay taliyihii hore ee howlgalkaas, Bridg Gen Massimo Mingaradi.
Munaasabadda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa Ergayga Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Michele Cervone d’Urso.
Taliyaha xilka wareejinayo ee howlgalka Midowga Yurub u qaabilsanaa tababaridda ciidamada dowlada Soomaaliya, Bridg Gen Massimo Mingaradi ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii February ilaa bishii December ee sanadkii 2014 ay dowlada Soomaaliya xerada Jaziira ee magaalada Muqdisho ku tababareen ciiidamo gaaraya ilaa 1400 oo askari, islamarkaana ay sanadkan 2015 tababari doonaan 1000 kun sarkaal kuwaasi oo awood u yeelan doono mustaqblka ay tababaraan ciidamada dowlada Soomaaliya.
Bridg Gen Massimo Mingaradi ayaa sheegay in howlgalka Midowga Yurub ay ku tababarayaan ciidamada dowlada Soomaaliya uu dhamaan doono sanadka 2016, isagoo xusay in howlgalkan oo soo bilowday sanadkii 2010 ay rajeynayaan in ay dowlada Soomaaliya ugu tababaraaan ciidamo gaaraya ilaa 7 kun oo askari.
Bridg Gen Massimo Mingaradi ayaa u mahad celiyay 12 wadan oo ka tirsan Midowga Yurub, kuwaasi oo ka qeyb daadanaya howlgalka ay Midowgaas ku tababarayaan ciidamada dowlada Soomaaliya.
“Waa guuleystay howgalka ay Midowga Yurub ku tababarayaan ciidamada dowlada Soomaaliya, marka laga eego dhanka siyaasadda iyo militariga” ayuu yiri Bridg Gen Massimo Mingaradi.
Ugu danbeyntii safiiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Michele Cervone d’Urso ayaa sheegay in Midowga Yurub ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowlada Soomaaliya iyo tababaridda ciidamada dowlada, si ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka guud ahaan dalka Soomaaliya.
“Sanadkii la soo dhaafay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya waxa ay Al-shabaab ka xoreeyeen magaalooyin badan, lakiin sanadkan waxaa loo baahanyahay in horumar la sameeyo” ayuu yiri Ambassador Michele Cervone d’Urso.
Howlgalka ay Midowga Yurub ku tababarayaan ciidamada dowlada Soomaaliya oo soo bilowday sanadkii 2010 ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadka 2016.
Akhri: Machadka Heritage oo daraasad ku sameeyey Federaalka Soomaaliya